Ingabe i-True Self inenkululeko yokuzikhethela? - Mytika Speak
Ikhaya / Okwangempela / Ingabe i-True Self inenkululeko yokuzikhethela?
Okwangempela ayinayo inkululeko yokuzikhethela. Uma bekwenzile, bekungeke kufihlwe ngumzimba wakho uhlamvu.
I-True Self yakho iqondisa uhlamvu lwakho lomzimba, nge imizwa, ukwenza izinqumo ezizohlinzeka ngemiphumela emihle kakhulu kuwe.
Ekugcineni, umlingiswa wakho angakhetha ukulalela leso siqondiso noma cha ngakho-ke nguyena onenkululeko ephelele yokuzikhethela.
Ngibona ngaphakathi kwamehlo akho
Ngimamatheka ngemuva kokuhleka kwakho
Ngiyaphakamisa phambi kwakho ukububula
Nami ngiphakamise ikhanda lakho phezulu
Ngisula izinyembezi emva kokukhala kwakho
Ngiyakuthanda lapho uthobekile noma ungajulile
Ngihamba nani njengesithunzi
Ngiqabula inhliziyo yakho ngikubambe ngqi
Kuqhubeke usuku lonke kuze kube sebusuku
Amathegiukuqonda Inkululeko Yokuzikhethela ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya Okwangempela